दुबई मा अन्तर्वार्ता मा पदयात्रा - भर्ती भोजन पारित गर्न गाईड
दुबईमा साक्षात्कारमा हिंड्नुहोस्
दुबईमा मोटर वाहन रोजगारीका लागि मार्गनिर्देशन
दुबई मा एक साक्षात्कार हो बोर्ड मा आफैलाई प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्रो प्रणाली। विशेष गरी यदि तपाइँ विशाल कम्पनीहरूको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो टोलीले सिर्जना गरेको छ विस्तृत जानकारी को लागि विस्तृत जानकारी। संयुक्त अरब एमिरेट्समा कसरी एक واک-मा अन्तर्वार्ता पारित गर्ने बारे पत्ता लगाउँदा। दुबई शहर कम्पनी धेरै स्थानहरु का एक गर्व मालिक हो संयुक्त अरब एमिरेट्समा रोजगारी खोज्नेहरूका लागि.
दुबई मा द वाल्क-इन साक्षात्कार र त्यसोभए कसरी काम पाउने?। धेरै उम्मेद्वारहरू हप्ताको दिनमा काम गरिरहेका छन्। सामान्यतया सोमबार देखि शुक्रवार सम्म बोल्दै। एकै साथ तपाईले अरू पनि विचार गर्नुपर्छ दुबईमा एक नौकरी खोज्ने तरिका। एक पटक प्रायः एक पोइन्ट अनदेखी एक नौकरी प्राप्त गर्न एक मानक तरिका हो। ती परिस्थितिहरूमा, दुबईमा नौकरी खोज्दै यो सजिलो छैन। युएईमा क्यारियर ग्लोबल रोजगार बजारमा लोकप्रिय हुन्छ। सामान्यतया, साक्षात्कारकर्ताहरू र हाइयरिंग म्यानेजर फेला पार्दै.
वर्तमान समय सम्म, तपाईं अझै पनि सक्नुहुन्छ राम्रो भर्ती प्रबन्धक खोज्नुहोस्। दुबईमा वाक-इन अन्तर्वार्ताहरू सञ्चालन गर्ने रोजगारदाताहरू सकारात्मक पक्षमा। यसलाई अर्को तरिकामा राख्नको लागि, واک-अन्तर्वार्ता युएईमा रोजगारी पाउनको लागि राम्रो तरीका हो। तपाईले कामका लागि आवेदन पाउने बित्तिकै दुबई। तपाईं संयुक्त अरब अमीरात मा नयाँ रिक्तता संग एक स्वागत पत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म धेरै कामदारहरूले कम्पनीमा हिंडेर भर्ती प्रबन्धकसँग कुरा गरेर क्यारियर पाएका थिए।
दुबईमा साक्षात्कारमा हिंड्नुहोस् - संयुक्त अरब अमीरातमा जागिर खोज्नुहोस्
ठूला कम्पनीहरु संग साक्षात्कार
तिनीहरू दुबईमा एक ट्वी-इन साक्षात्कार प्रदान गर्दैछन्
अग्रभूमि प्रमुख भर्ती कम्पनीहरूमा। दुबईमा खुद्रा राक्षसहरूका लागि भर्ती। ती परिस्थितिहरूमा, औद्योगिक चिन्ता र निर्माताहरू र टेलिकम प्रदायकहरूले द्रुत अन्तर्वार्ताको लागि स्थलहरू पनि निर्माण गर्दछन्। एकै साथ तपाईलाई पनि चाहिन्छ कर्मचारीहरू र भर्ती प्रबन्धकलाई आकर्षित गर्न तपाईंलाई आकर्षित गर्न। वास्तवमा कुराको रूपमा, राम्रो व्यवसाय हो जब तपाईं आफैं नौकरी खालीको लागि योग्य हुनुहुन्छ। दुबईमा कम्पनीहरु कर्मचारीहरूको एक ठूलो संख्या भर्ती। उनीहरूको लागि उत्तम तरिका उनीहरू सकेसम्म धेरै प्राप्त गर्नु हो। छोटो अवधिमा। केही यी सेवाहरू कल गर्ने हाईनि्ग म्यानेजर। सामूहिक भर्ती पेशेवरहरूले सहयोग गरेमा।
ठूला कम्पनीहरूले एक वा दुई नयाँ कार्यकारीहरू भाडामा लिएका छैनन्। अधिकजसो उच्च टेक कम्पनीहरु लगभग हरेक दिन रोजगार। यो दिमागमा राखेर, तपाईले उच्च मूल्या rated्कन गरिएको रोजगार प्रस्तावहरूको लागि खोजी सुरू गर्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, बैंकहरूमा जागिर खोज्दै एक स्मार्ट विचार पालन गर्न जस्तो देखिन्छ। तपाईले विचार गर्नु पर्ने अन्य कम्पनीहरू अमीरातमा मोटर वाहन र आईटी कम्पनी हुन्। किनभने तिनीहरू सबै भर्ती गर्दै छन् र तपाईं सजिलै संग यी अद्भुत कम्पनीहरूको साक्षात्कारमा छिटो पैदल भेट्टाउन सक्नुहुनेछ।
यदी तिमी ताजा पाकिस्तान को एक्सटेट स्नातक। उदाहरण को लागी, तपाई भर्खर युएई आउनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले निश्चित रूपमा आफ्नो रोजगार खोजी अधिक गहिरो रूपमा प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। किनभने स्थानीय उम्मेदवारहरू सम्भावित पहिले नै सीभी को केहि हप्ता पहिले पठाईएको छ। यो नबिर्सनुहोस् कि ठूला कम्पनीहरूले 8 हप्ता सम्म 12 को लागी भर्ती गरिरहेछन्।
यूएईमा साक्षात्कारमा हिड्ने कसरी काम गर्ने?
हाम्रो कम्पनीसँग दुबईमा साक्षात्कारमा हिंड्ने लागि तयार हुनुहुन्छ?
यदि तपाइँ दुबईमा रोजगारीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले हाम्रो भ्रमण गर्नु पर्छ दुबईमा काम कसरी पत्ता लगाउने बारे विस्तृत गाइड। यसभन्दा पहिले तपाईले विदेशमा कामका बारे सोच्नुहोस् एक्स्प्याटको रूपमा। तपाईं धेरै हुनु पर्छ क्यारियर बजार को बारे मा राम्रो जानकारी। विशेष गरी यदि तपाइँ इमिरेट्समा सर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले जान्नु आवश्यक छ कसरी काम गर्ने कामको लागि मार्केटिंग प्रयोग गर्ने। यसबाहेक, यदि तपाईं वार्ता सुरु गर्न को लागी हातमा पर्नु आवश्यक छ।
एक स्मार्ट विकल्प मध्ये एक हाम्रो साक्षात्कार भेटिन्छ WhatsApp स्थानीय समूहहरू। त्यहाँ भर्ती पेशेवरहरू छन् जो हाल आबू धाबी र दुबईमा काम गरिरहेका छन्। 80% भन्दा बढी दुबईको जागिर खोज्नेहरू CV को अनलाइन पठाउँदै। त्यसैले यो एक स्मार्ट तरीका हो केहि रोजगारदाताहरु लाई भेट्न। आमने सामने कुरा गर्नुहोस् वा पछाडि WhatsApp समूहहरू आफैले प्रस्तुत गर्छन् भविष्यका रोजगारदाताहरूलाई। यस तरिकाले, तपाईं सकारात्मक परिणाम पाउन सक्नुहुन्छ क्यारियर अनुसन्धान मा।
तपाईंको रोजगारी खोजको लागि अर्को स्मार्ट विचार। यो हुनेछ होटल दुबई मा कार्यरत। उदाहरण को लागी, तपाईं आफ्नो अपडेट गरिएको सीभीको साथ हिड्न सक्नुहुन्छ र खाली रिक्त पदहरूको लागि एक सुपरवाइजरको रूपमा। तिनीहरू मध्ये केही यदि उनीहरूलाई नयाँ स्टाफको खाँचो छ भने। लगभग घटनास्थल मा एक अन्तर्वार्ताको आयोजन। र तपाईं हुन सक्छ अर्को दिनमा तपाईंको नयाँ जीवन सुरु गर्ने मौका।
दुबई मा साक्षात्कार मा तपाइँको हुन सक्छ !. अर्कोतर्फ, तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ अरूले युएईमा थप पत्ता लगाउन.
एक प्रकार को साक्षात्कार र एक चलना साक्षात्कार के छ?
हाम्रो कम्पनीसँग दुबईमा साक्षात्कारमा हिँड्न तयार हुनुहुन्छ?
दुबई बल्क भर्ती
अर्कोतर्फ रोजगारदाता र हाइरि manage प्रबन्धकहरू। एचआर कम्पनीहरू मुख्य रूपमा एक واک मा अन्तर्वार्ता आयोजित। उम्मेदवारहरूको ठूलो संख्या ठूलो संख्यामा छन्। जागिर खोज्नेहरू ठूलो संख्यामा आएर एकै दिनमा प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्। बल्क भर्ती प्रबन्धकहरूबाट नौकरी प्राप्त गर्दै संयुक्त अरब अमीरातमा कुञ्जी हो। प्रारम्भिक स्क्रीनिंग को उद्देश्य र पेशेवर भर्ती मोबाइल मा भर्ती गर्दै छन् दशैंको रिक्तताका लागि।
दुबई शहरको एक्सटेट्सको लागी एक सपना हो। त्यहाँ धेरै छन् दुबईमा भारतीय नौकरी खोज्ने जो अमीरातमा रोजगार पाइरहेका छन्। अवश्य पनि, तिनीहरू सबैले रोजगारी अनलाइन खोजी गरिरहेको छैन वा सीवीएसको साथ हिड्दै। अधिकांश बहुमतले मात्र स्थानीय रोजगार पोर्टलमा पुनःसुरु अपलोड गर्दैछ। अनि तेस्पछि जादू को लागि प्रतीक्षा भयो.
दुबई शहरमा तत्काल भर्ती
मानव संसाधन मन्त्रालयबाट रिक्त पदहरू हटाउने उम्मेदवार। साक्षात्कारकर्ताहरूलाई प्रायः प्रत्येक रिक्त स्थानमा एक दिनको प्रस्ताव प्रस्ताव पत्र दिइएको छ जुन उनीहरूले नयाँ कर्मचारीलाई प्रस्ताव गर्दैछन्। दुबईका कम्पनीहरू दुवैको लागि फायदेमंद व्यवस्थित प्रबन्धकहरू र भर्ती प्रबन्धकहरू। लाई भर्ती प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् तपाईंलाई एक दिन मा नौकरी प्राप्त गर्न आवश्यक छ। र आवेदकहरूका लागि, तिनीहरूले समान दिनमा काम पुष्टिकरण पाउँछन्।
तपाईं दुबईको अबू धाबी मा धेरै कम्पनीहरु पाउन सक्नुहुन्छ। को हो लगभग अमीरात मा स्थान मा भर्ती गर्दै छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं उच्च प्रविधी कम्पनीहरूमा काम खोज्न सक्नुहुन्छ। एउटा उदाहरण हो गुगलमा क्यारियर सुरू गर्नुहोस् वा केहि क्रिप्टोकरन्सी नयाँ स्टार्टअपहरूमा। तिनीहरू भाँडामा छन् 2020 सम्म दुबई एक्सपो चालू भइरहेको बेला.
दुबईमा कम भर्ती शुल्क
यस अभिप्रायले, भर्ती प्रक्रिया हो व्यापक मापन को लागी भयो र थोक भाडामा। यस कारणका लागि, भर्ती उम्मेद्वारको लागत कम्पनीले अपेक्षा गरे भन्दा कम छ। र त्यो धेरै पटक, कम भर्ती लागत ठीक काम गर्दैछ। दुबई शहर कम्पनीहरू छन् नौकरी रिक्त पदहरूको लागि विज्ञापन। यस मामला मा, दुबई मा बहु स्थानहरु मा पुग्दै कम्पनीले केहि लागत बचाउन सक्छ। राम्रो काम पोर्टलमा एकल विज्ञापनले लागत घटाउनमा मद्दत गर्दछ भनेर बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले प्रयास गर्नुहोस् दुबई मा रोजगार को लागी आफैलाई प्राप्त गर्न। एक नजर राख्नुहोस् कसरी भर्तीकर्ताहरूले काम गरिरहेका छन् र सँधै स्थानीय बजारबाट अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
गुणस्तर संसाधन र भर्ती
दुबईमा साक्षात्कारमा हिंड्ने मुख्यतया सप्ताहांतमा आयोजित। धेरैको कारण दुबईमा काम गरिरहेका उम्मेदवारहरू सोमबार देखि शुक्रबार सम्म। बहुराष्ट्रीय गुणस्तरको स्रोतको लागि महत्त्वपूर्ण छ। 2019 कम्पनीहरूले साक्षात्कारको लागि यो सबैभन्दा राम्रो उम्मेदवार मध्ये एक बनाउन सक्छ। अधिकांश उम्मेदवारहरू सप्ताहांतमा बन्द छन्।
यसैले कुशल र प्रतिभाशाली उम्मेदवार संयुक्त अरब अमीरातमा। सब भन्दा सम्मोहक प्रमाण कि भन्न। यदि तपाइँ साक्षात्कार को लागी जानुहुने छैन भने यो सोमवार दिन देखि शुक्रवार दिन मा। अवश्य काम प्रतिबद्धता को कारण। दुबईको अन्तर्वार्तामा हिड्नका लागि, तपाईं सप्ताहन्तमा अन्तर्वार्ताहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ।
नयाँ भारतीय नौकरी खोजकर्ताहरूको लागि खाडी कार्यहरू तातो विषय हो। दुबईमा विशेष गरी एक्स्पोका लागि। अधिकांश उम्मेद्वार भर्ती व्यवस्थापकहरूलाई सीभी पठाउँदैछन्। आशा छ तपाईंले पहिल्यै गरिसक्नुभयो। किनभने तपाई दुबई जानुहुनेछ। तपाईं युएई आइपुग्दा तपाईंसँग बुकि interview गरिएको अन्तर्वार्ता वा प्रबन्ध योग्य वाक-इन अन्तर्वार्ता हुनुपर्छ। अवश्य पनि, तपाइँले यसलाई एक्स्पेट्सको लागि हाम्रो गाईडमा गर्न सक्नुहुन्छ काम समूह केही रोजगार खोज्नेहरूले तिनीहरूलाई नयाँ भर्तीकर्ताहरू फेला पार्न उपयोगी पाए। विशेष गरी यदि तिनीहरू विदेशमा आधारित छन् र दुबई भ्रमण गर्न अगाडि हेर्दै.
नयाँ उम्मेदवार र व्यवस्थित प्रक्रिया भर्दै
भर्ती प्रक्रिया सधैँ दुबईमा व्यवस्थित प्रक्रिया हो। एक साक्षात्कारमा हिड्न अग्रिमलाई सुव्यवस्थित गर्न सकिन्छ। हरेक जब तपाईं एक नौकरी खोज्दै हुनुहुन्छ। ती परिस्थितिहरूमा कम्पनीहरूले सँधै अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारहरूलाई पहिले सर्टलिस्ट गर्दछ। अर्को तर्फ क्यारियर खोजी एक हो शिक्षा र योग्यताको आधार परिणाम।
तथ्यको रूपमा, लिखित परीक्षण धेरै मासिक रूपमा प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक भर्ती एजेन्सीहरू धेरै विस्तृत र प्राविधिक प्रक्रियाको लागी दौडिए। नयाँ उम्मेदवारहरू भर्ती गर्दै र उचित तरिकामा अन्तर्वार्ता चलाउन महत्त्वपूर्ण छ। त्यसरी नै भर्तीकर्ता र ब्यवस्थापकहरूसँग अन्तिम मानव संसाधन सम्झौता गर्दछ। यो प्रक्रिया बनाउँदै युएईमा बस्नको लागि धेरै चासो। व्यवस्थित प्रक्रियाले कम्पनीहरूले युएईमा रोजगारका लागि अनावश्यक उम्मेदवारहरू फिल्टर गर्न मद्दत गर्दछ। भर्तीकर्ताहरूले फिल्टरिंग उम्मेद्वारहरू सबैभन्दा उपयुक्त हुन एमबीए संग अन्तरराष्ट्रीय एक्सटेट्स दिनको अन्त्यमा।
साथै, संयुक्त अरब अमीरात सरकार महिलाहरु लाई रोजगार को लागि जागरूकता बढावा दिइरहेका छन्। र हामी सबैलाई हिड-इन अन्तरवार्ताको लागि थाहा छ महिलाहरू सधैं आउँछन्। त्यसैले यदि तपाइँ नौकरी खोज्दै हुनुहुन्छ र दुबईमा तपाई महिला हुनुहुन्छ। तपाईंले व्यवस्थित प्रक्रियालाई विचार गर्नुपर्दछ। अनि निश्चित रूपमा, यसको लाभ उठाउनुहोस्।
दुबईको नौकरिहरु सामेल गर्न उत्तम प्रस्ताव
GCC देशहरूमा धेरै रोजगारदाताहरू सँधै नयाँ रिक्त पदहरूको लागि भर्ती. प्रवासीहरूले अनुभव गरेका छन् बाट धेरै राम्रो ज्याला दुबई कम्पनीहरू। हरेक दिन नयाँ कम्पनीमा सम्मिलित हुने अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेद्वारहरूको ठूलो संख्या दक्षिण अफ्रीका बाट दुबई सम्म। त्यसोभए संयुक्त अरब अमीरातमा रिक्त पदहरू सँधै ती बनाइएका छन् जसमा हिड-इन साक्षात्कार हुँदा प्रक्रिया पारित भयो। र जब तपाईं सामेल हुन्छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ दुबई नौकरिहरु को लागि.
इमान्दार हुन प्रत्येक उम्मेद्वारले कम्पनीको बारेमा ठूलो महसुस गर्नुपर्दछ। र सँधै सहज महसुस गर्नुपर्दछ दुबईमा नयाँ क्यारियरमा सम्मिलित हुनुहोस् उदाहरणका लागि अफिलिएट मार्केटिंग। अधिकजसो दुबईमा बिदा दुबई र अबू धाबी मा राम्रो तरिकाले भुक्तानी कम्पनीहरु संग शामिल हो। नकारात्मक पक्षमा, त्यहाँ धेरै सामूहिक रोजगारीकर्ताहरू छन् जसमा संलग्न हुन इच्छुक छन् दिन नयाँ कामको लागि। उस्तै परियोजना, र थप समान जिम्मेवारी लिन र एकै स्तरमा।
दुबईमा हिड-इन साक्षात्कार कसरी पारित गर्ने?
एक्सटेट्स र भर्ती विचारहरुको व्यक्तिगत समाधान:
दुबईको रूपमा सबैभन्दा ठूलो भर्ती कम्पनी। दुबई शहर कम्पनीसँग युएई बजारमा उपकरणहरू छन्। हाम्रो कम्पनी जम्मा गर्ने क्षमता जुन हामीलाई नयाँ रोजगार खोज्नेहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ। दुबई सिटी कम्पनी भर्ती टोलीले भारतबाट दुबईमा उल्लेख्य संख्याको रोजगार आवेदनहरू प्रक्रिया गर्दछ। एचआर कम्पनीहरूले उम्मेद्वार भर्ती गर्छन् र तिनीहरूलाई हाम्रो आफ्नै आन्तरिक डेटाबेसबाट चयन गर्दछन्।
दुबईमा तपाईले धेरै रोजगार एजेन्सीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं बस शहर जान सक्नुहुन्छ र आफ्नो सीभी संग हिंड्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ छन् सल्लाहको केहि राम्रो बिट्स जुन तपाईंले सुरु गर्नु अघि अनुसरण गर्न आवश्यक पर्दछ। सब भन्दा सम्मोहक प्रमाण कि हामी हाम्रो उम्मेद्वार छिटो राख्दै छौं दुबईमा शिक्षक पदको लागि। तपाईले दुबईमा हाम्रो कम्पनीसँग पैदल-इन साक्षात्कार लिनु पर्छ।
हाम्रो पूर्वनिर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारहरू हाम्रो अपलोड पुन: सुरुवात वेबपेजबाट हो। अर्को तरिका राख्न, हामी राख्दै छौं प्रतिक्रिया धेरै ध्यानपूर्वक संयुक्त अरब अमीरातमा प्रत्येक उम्मेद्वारको लागि। लिङ्कडेन र फेसबुकमा हामी धेरै सक्रिय छौं। र हाम्रो टोलीको माथि नयाँ क्यारर विज्ञापन राख्नु दुबईमा एक मानक वाइ-इन साक्षात्कारको सट्टा प्रेस र वेबमा।
दुबई मा साक्षात्कार मा पैदल - तपाइँको तयार रहनुहोस्.
दुबईको कुरामा साक्षात्कारमा किन हिड्छ?
संयुक्त अरब अमीरातमा तपाईंको पुनः सुरु प्रोफाइलको ठूलो प्रदर्शन
उनीहरूको सीवीसँग हिँड्ने म्याद किन कारण। किनकि यसको लायक छ यो पप भित्र र केवल मद्दतको लागि सोध्दछ। यो प्रकारको नौकरी खोजकर्ताहरूले क्यारियर खोजीमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। भर्ती एजेन्सीहरू र हाइनि manage प्रबन्धकहरू। त्यस्तो प्रकारको जागिर खोज्नेहरू धेरै राम्रोसँग प्रेरित छन्। यसैले उनीहरूले दुबईमा केही गुणस्तर साक्षात्कार प्राप्त गरे। भर्तीकर्ता र हेडहन्टरहरूले पुनःसुरुमा आधारित नयाँ उम्मेद्वारहरूको परीक्षण गर्छन्। र निस्सन्देह, यदि क्यारियर खोजी गर्ने राम्रो अनुभव छ उनीहरूले उसलाई जागिर दिनेछन्। दुबईमा हाम्रो कम्पनीको साथ पैदल यात्रा अन्तर्वार्ता लिनुहोस्। यो ठाउँ तपाइँ र तपाइँको परिवारको लागि बनेको छ.
आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्नुहोस्
दुबई शहरका केही स्थानीय अधिकारीहरू। छ पहिले नै राम्रो प्रतिष्ठा स्थापित छ। त्यसैले तपाईं कुनै पनि तरिका मा आफ्नो क्यारियर प्राप्त गर्न जाँदैछन् कि याद गर्नु पर्छ। यो एक ठूलो प्लस पोइन्ट हो यदि तपाईं पहिले इमिरेट्समा काम गरिरहनु भएको छ। तर नयाँ कडा नाम स्थापना गर्न र अमीरातमा राम्रो जागिर प्रस्ताव गरिरहेको छ कडा छ। दुबईमा आफ्नो प्रतिष्ठाको निर्माण गर्न समय र प्रयत्न लिन्छ। सकारात्मक पक्षमा, तपाईं हाम्रो कम्पनीको साथ छिटो छिटो आफ्नो क्यारियर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ अनुभवी हुनुहुन्छ र योग्यता एक साक्षात्कार प्राप्त गर्न। भर्ती एजेन्सीहरूको साथ एक कडा रिपोर्ट स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जुन चाहिँ तपाईंको भविष्यको क्यारियर आन्दोलनको साथ तपाईंलाई मद्दत गर्दछ?। केही भर्ती कम्पनीहरू छन् उम्मेद्वारको बजारबाट उम्मेदवारहरूको भारी संख्यामा अनुसन्धान गर्दै। अनि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा र विश्वास आधारमा अनुभवमा स्थापना गर्दै। उनीहरूको आँखामा यस कारणको लागि, तपाईंले एक नयाँ व्यक्तिको लागि चुनौतीपूर्ण खेल जान्ने मानिस जस्तो देखिन्छ।
नौकरी खोज प्रविधि तपाईंको समयको लायक छन्
जब तपाइँ आफ्नो जागिरको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ। तिम्ले पर्छ राम्रो सुरू गर्नुहोस्। र पुनः सुरुवात उत्तम खोज मार्केटिंग उपकरण प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र सम्भवतः दुबईमा व्यावसायिक पुन: सुरुवातको बारेमा जान्ने कसैलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं कम लागतको साथ इन्टरनेटबाट पुन: सुरूवात लेखक भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईंले गर्ने गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका दुबईमा पुन: प्रयोग वितरण सेवा प्रयोग हो। र केहि व्यक्तिहरू जसले तपाईंको CV कम्पनीमा सही प्रबन्धकलाई छोड्न सक्दछ। दुबईमा, उदाहरणका लागि, तपाईं मर्सिडीज बिनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। संयुक्त अरब अमीरातमा, त्यहाँका लागि अनगिनत अवसरहरू छन्।
एउटा तपाईंको समयको लायक छ वर्गीकृत दुबई वेबसाइटहरू। वेबसाइटमा स्थानीय रोजगारदाताहरूले काम थप्न लगाउँछन्। तिनीहरू कम लागत छन् र तपाईं चाँडै नियोक्ताहरूसँग एक अन्तर्वार्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ धेरै कम साधारण रोजगारी साइटहरू छन् तपाइँले हेर्नु पर्छ: डबिजल दुबई क्लासिफाइड, खालिज टाइम्स फ्री वर्गीकृत, दुबई Classifieds.com। अर्कोतर्फ, तपाईले तपाइँको CV लाई पनि पठाउनुपर्छ अन्य कम्पनीहरू सऊदी अरबमा उदाहरणका लागि। दुबई मा भर्ती गर्दै छन् उन मध्ये केहि पनि छ। र उनीहरूले साक्षात्कारको लागि तपाईंलाई कल गर्न सक्छन्।
CV मा खराब प्रतिष्ठा - यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
तपाईले निश्चित गर्नु पर्छ कि यो ठीक छ। दुबईमा केहि रोजगार खोजी गर्नेहरूसँग अनुभवको कमी छ। त्यसो भए, आफूलाई दुबई शहरको बारेमा अलि बढी शिक्षा दिनुहोस् र तपाइँको टोलीले कसरी मद्दत गर्न सक्दछ पत्ता लगाउनुहोस्। र कुनै पनि रोजगार प्राप्त गर्न तिनीहरू बस कुनै पनि प्रस्तावहरू समातिरहेका छन्। त्यस आधारमा CV मा त्यहाँ केहि रोजगारहरू मात्र हुनेछन् केही महीनाहरूको लागि। र जब नियोक्ताहरू, भर्तीकर्ताहरू, HR प्रबन्धकहरू CV मा एक नजर राख्नेछन्। त्यसोभए उनीहरूले अनुचित निर्णय लिन्छन् यो व्यक्ति एक हो द्रुत कार्य परिवर्तन। त्यसैले सुनिश्चित गर्नुहोस् कि एक राम्रो तरिकाले फेरि सुरू गर्नुहोस्। त्यो एक व्यक्ति जस्तो लाग्दैन जुन कल स्थिति बदलिनेछ।
दुबईमा वाक-इन अन्तर्वार्ताको लागि आफै तयार हुनुहोस्। यदि तपाईं हाम्रो कम्पनीमा सीभी अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईंले त्यो पाउनुहुनेछ। हामी काम गर्दैछौं संसारमा सबै भन्दा राम्रो स्थान मा.
संयुक्त अरब अमीरात मा करियर र दुबई मा नौकरी
के तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ? दुबईमा काम यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ हामी हामी मद्दत गर्न सक्छौं। The The In The New Career यूएई र भर्ती कम्पनीहरू हेर्नुहोस्। दुबईमा भर्ती कम्पनी र स्थानीय नौकरी बोर्ड क्षेत्र। तिनीहरू साँच्चै तपाईंको CV सँग आवेदन गर्न योग्य छन्।
पुन: सुरु गर्नुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो शहरमा! - दुबई सिटी कम्पनी दुबई मा साक्षात्कार मा हिंड्नुहोस् अब यो प्राप्त गर्नुहोस् !.